नेपाली महिला फुटबल टिम एसियन कपमा छनोट होला ? | सबै खेल
नेपाली महिला फुटबल टिम एसियन कपमा छनोट होला ?
२ आश्विन २०७८, शनिबार १३:०३
अस्ट्रेलियन प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सको प्रशिक्षणमा रहेको नेपाली महिला फुटबल टिम यतिखेर उज्वेकिस्तानमा छ। एक साताअघि मात्र उज्वेकिस्तान पुगेको नेपाली महिला फुटबल टिमको लक्ष्य एसियन कप खेल्ने छ।
आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको औपचारिक यात्रा नेपाली महिला टिमले आजबाट गर्दैै छ। यो यात्रामा पहिलो प्रतिद्वन्द्वी रहनेछ फिलिपिन्स । एएफसी महिला एसियन कप छनोटमा समूह एफमा नेपाल, फिलिपन्स र हङकङ छन् ।
दुवै टिम बलिया भएकाले नेपाललाई एसियन कपमा छनोट हुन त्यति सहज हुने छैन। दुवै टिम फिफा वरियतामा पनि नेपालभन्दा माथि छन्। वरियतामा नेपाल १०१औं स्थानमा छ भने फिलिपिन्स ६८औं र हङकङ ७६औं स्थानमा छ।
यो समूहको शीर्ष स्थानमा रहनसके नेपाली महिला टिमले अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कप खेल्ने छ। करिब २ महिनाको बन्द प्रशिक्षण र २ मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर नेपाली टिम उज्वेकिस्तान पुगेको हो।
आज दिउँसो ३ः४५ मा हुने खेलमा फिलिपिन्सलाई हराउँदै नेपाली टिम एसियन कप छनोटको यात्रालाई एक कदम अगाडि बढाउने योजनामा छ। तर, फिलिपिन्सविरुद्धको खेल नेपालका लागि त्यति सहज भने हुने छैन।
किनभने फिलिपन्स नेपालभन्दा बलियो टिम हो। उ फिफा वरियतामा नेपालभनदा ३३ स्थानमाथि छ । नेपाल फिफा वरियतामा १०१औं स्थानमा छ भने फिलिपिन्स ६८औं स्थानमा छ।
७ वर्षपछि मुख्य स्ट्राइकरविना खेल्न लागेका ले पनि नेपाली टिम दबाबमा हुनेछ । गतवर्ष घुँडामा चोट बोककाले मुख्य स्ट्राइरक सावित्रा भण्डारी मैदान बाहिर छिन।
प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले पहिलो पटक नेपालको महिला टिमसँग टुर गरेकाले आफू उत्साहित भएको बताएका छन्। उनले यो नेपाली टिमका लागि ठूलो अवसर भएको र त्यसका लागि धेरै मिहिनेत गरेको बताए।
प्रशिक्षक फिलिप्सले विभिन्न खालका चुनौती भएपनि राम्रो गर्ने योजनाका साथ अघि बढ्ने बताए । उनले फिलिपिन्सले यसअघि पनि एसियन कप खेलिसकेकोले नेपालले सामूहिक रुपमा खेल्नुपर्ने बताए ।
यस्तै, नेपाली टिमका कप्तान रेनुका नगरकोटीले एसिया कपको छनोट खेल्न सबैजना उत्साहित रहेको बताएका छिन् । उलने ‘टिममा सबै जना खेल्न उत्साहित छौं । उनले नेपालमा दुई महिनाको तयारी दुई मैत्रीपूर्ण खेलले पनि धेरै सहयोग पुगेको र टिमको अवस्थाबारे थाहा पाएको बताइन् ।
अमेरिकाविरूद्ध नेपालको लज्जास्पद हार